The Galaxy S20 FE bụ Samsung mbụ na-enweta One UI 3.1 | Gam akporosis
Galaxy S20 FE bụ Samsung mbụ na-enweta One UI 3.1
Ngwaọrụ Samsung mbụ natara ụdị Samsung nke otu oyi akwa nhazi UI 3.1 bụ Galaxy Tab S7 na S7 +Agbanyeghị, ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị ngwaọrụ ọzọ, gụnyere smarpthone, emelitere maka ụdị ọhụụ nke Samsung nke usoro nhazi.
Samsung ka tọhapụrụ One UI 3.1 maka Galaxy S20 FE, si otú a ghọọ pmbụ ama site na ụlọ ọrụ Korea iji nweta mmelite a, mmelite dị ugbu a na Spain, Belgium, Czech Republic, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Switzerland na United Kingdom.
N'ịbụ obere mmelite, mbipute a agunyeghi onu ogugu nke ihe ohuru. N'etiti akwụkwọ akụkọ ndị a, anyị na-ahụ obere tweaks na njirimara onye ọrụ, ohere nke ịgbakwunye nsonaazụ oku vidiyo na ngwa dịka Google Duo ma ọ bụ WhatsApp, ntinye nke nri Google Discover na ohere iwepu data GPS na foto tupu ịkekọrịta ha.
Firmware maka mmelite a bụ nọmba G781BXXU2CUB5. Iji melite ngwaọrụ gị na nsụgharị ọhụrụ a, naanị ị ga-agafe Ntọala> Mmelite ngwanrọ> Budata ma wụnye ngalaba. Iji zere na n'oge usoro anyị nwere ike ida ozi echekwara na ngwaọrụ, ọ bụ ihe amamihe dị na-eme ka a ndabere oyiri tupu oge eruo.
Galaxy S20 FE bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma anyị nwere ike ịchọta ugbu a n'ahịa, dabere na uru maka ego ọ na-enye. N'ihi nke a, ọ na-ere ahịa nke ọma n'ọtụtụ ahịa, yabụ na ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Samsung na-agbanye nnukwu ego na ya ma wepụta One UI 3.1 tupu oge ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ dị elu.
Anyị nwere ike ịchọta Galaxy S20 FE na Amazon maka euro 559.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Galaxy S20 FE bụ Samsung mbụ na-enweta One UI 3.1
OnePlus 9 na OnePlus 9 Pro ga-etinye chaja na igbe ahụ